प्रधानमन्त्रीको आग्रह कस्ले माने ? कस्ले मानेनन् ? कि टेरेनन् ? -
२५ बैशाख २०७७, बिहीबार २१:५९ May 7, 2020
प्रधानमन्त्रीकै आह्वानमा कतिले बाले भन्ने कुरा यस अर्थमा पनि महत्वपुर्ण हुन्छ, कि यसले कति जनताले उक्त कुरा स्विकारे वा अवज्ञा गरेनन् ।
बिष्णु लामिछाने । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुद्ध जयन्तीको उपलक्ष्यमा एक भिडियाे सन्देश जारी गर्दै घरघरमा दीपावली गर्न आह्वान गरे । शान्तिको कामना गर्न र कोरोना संक्रमितको उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीहरु, स्वयंसेवीहरु, सहयोगीहरुप्रति ऐक्यबद्धता जनाउन आ- आफ्ना संस्था, घर र निवासहरुमा बिहीबार साँझ ७ बजे दीप प्रज्ज्वलन गर्न अनुरोध गरेपनि कतिले दिप प्रज्वलन गरे त भन्ने प्रश्न भने उठेकाे छ।
प्रधानमन्त्रीकै आह्वानमा कतिले बाले भन्ने कुरा यस अर्थमा पनि महत्वपुर्ण हुन्छ, कि यसले कति जनताले उक्त कुरा स्विकारे वा अवज्ञा गरेनन् । तर स्थानिय सरकारकै प्रतिनिधी वा जिम्मेवार व्यक्तिले नै दिप प्रज्वलन गरेनन भने अन्य जनतामा कस्ताे प्रभाव पार्छ वा यसकाे अर्थ के हुन्छ ? मनमा लागेकाे कुरा यही हाे ।
झापाकाे बुध्दशान्ति गाँउपालिकाका दुइजना वडा अध्यक्ष, वडा कमिटी अध्यक्ष र २ जना वडा सदस्यले दिप प्रज्वलन गरेनन् । नजिकै भएका कारण देखिएकाे याे एउटा उदाहरण हाे ।
यस्ताे त देशभर कति भयाे हाेला तर यसकाे अर्थ के हाे ? कि उनीहरूले प्रधानमन्त्रीकाे कुराकाे अवज्ञा गरे या उनीहरूलाइ उचित लागेन ।
निन्दा गर्नकै लागी याे लेख लेखिएकाे हाेइन तर सरकारकै जिम्मेवार व्यक्तिहरू, त्यसमाथी प्रधानमन्त्रीकै गृह जिल्ला र एक जना वडाध्यक्ष त नेकपाकै हुन् । दिप प्रज्ज्वलन नगर्ने अर्का एक वडाध्यक्ष कांग्रेसबाट विजयी हुन् । अरू तिन जनामा एकजना नेकपाकै वडा कमिटी अध्यक्ष र अरु दुइजना नेपाली कांग्रेसबाट विजयी वडासदस्य हुन्।
याे त्यती ठुलाे कुरा त नलाग्ला तर यसले जनतालाई के सिकाउँछ वा प्रधानमन्त्रीकाे कुरा सरकारकै मान्छेहरू त मान्दैनन भने यसकाे के अर्थ भनेर जनता प्रश्नचाहीँ तेर्साउन सक्छन् ।
बाँकी उनीहरूले किन बत्ती बालेनन् भन्ने उनीहरू नै जानुन् । तर यति हाे दिप प्रज्वलन सफल भयाे भन्ने चाही स्विकार्न सकिदैन ।
नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या १ सय १
युवालाई पुर्नजीवन दिलाउन प्रयासरत् अर्जुन राई क्वारेन्टाइनमा ब्यस्त
२० आश्विन २०७७, मंगलवार २०:१८ Admin20
२ श्रावण २०७७, शुक्रबार ०९:२० Admin20
३२ जेष्ठ २०७७, आईतवार ०६:५८ Admin20